Shil Gaari Oo Dhaliyay Qasaare Lhaawac Leh Oo Ka dhacay Bartamaha G/Gedo
Shilkan gaari oo ka dhacay wadada xiriirisa Degmada Baladxaawo iyo Deegaanka Tuulo barwaaqo Ee Bartamaha Gobolka Gedo ayaa waxaa ku dhaawacmay dad ka badan 9Ruux xili gaarigaasi uu ka so hoobanayay meel Biyo mareen ah .
Dadka dhaawacyada ay ka soo gaartay Shilkaasi oo qaba dhaawacyo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culusba ayaa loola cararay degmada Garbahaareey Ee Xarunta gobolka Gedo oo qiyaastii ilaa 20mail u jirta halka uu shilku ka dhacay .
Inkasto aan tafaasiil laga helin xaalada ay ku sugan yihin dhaawacyada oo ay ku jiraan 2 Dumar ah oo dhaawac xaga feeraha ah qaba sababo la xiriira isgaarsiinta oo xun ayaa wararka laga helayo saraakiisha caafimaadku ay sheegayaan in xaalada Dadkaasi iminka Gacanta lagu hayo .
Qaar ka mid ah Ehelada Dadka dhaawaca uu soogaaray ayaa gaaray goobta shilka uu ka dhacay si ay u soo eegaan eheladooda .
Shilkaani baabuiur ayaa la sheegayaa in uu yimid kadib markii uu gaarigaasi goostay bareegii xili lagu guda jiray Habeenimo taas oo aheyd gelinkii dambe ee xalay .
Inta badan shilalka ka dhaca deegaankaasi ayaa soo badanayay taas oo darawalada ay ku eedeeyaan in ay tahay wadada isku xirta deegaankaasi oo xun iyo weliba gawaarida ay wataan wadayaasha oo gaboobay waxaana shilalkaasi ku geeriyoda dadfarabadan oo noloshooda ku waaya .
Max’ed Gaarane Aadan